Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare dowladda Puntland oo soo saartay War Galin Muhiim ah oo ku saabsan imtixaamadka qaran ee soo socda. | puntlandi.com
Sunday, May 14th, 2017 | Posted by Pi
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare dowladda Puntland oo soo saartay War Galin Muhiim ah oo ku saabsan imtixaamadka qaran ee soo socda.
14/may/ 2017- Wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada Puntland , iyadoo ka ambaqaadaysa nabad gelyada, habsami u socodka iyo fududaynta maamulka imtixaanaadka ayaa waxay samaysay xarumo qaybin oo imtixaanka lagu sii qaybiyo. Magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe, Qardho, iyo Boosaaso ayaa loo aqoonsaday xarumo imtixaanka lagu sii kala qaybiyo, waxaana ka hawl geli doonaa saraakiisha waaxda imtixaanaadka iyo kormeerayaal guud, kuwaas oo fududayn doona maamulka imtixaanka.
Dhamaan Godoomiyeyaasha Waxbarashada Gobollada, Kormeerayaasha, ilaaliyaasha imtixaanaadka, ardayda iyo waalidkaba , Waxaa lagu wargalinayaa in nidaamkii imtixaan qaadisata wax wayn laga bedelay.
Kormeerayaasha iyo ilaaliyayaasha imtixaanaadka, kalkaaliyayaashooda iyo saraakiisha ka socota waaxaha imtixaanaadka iyo maamulka ee wasaaradda waxbarashada ee lagu qoray gobollada Bari, Sanaag, Haylaan iyo Gardafu waxaa lagu wargelinyaa in ay si toos ah isaga xaadiriyaan magalaada Boosaaso ugu dambyan maalinta arbacada ee bishu tahay 17/05, halkaas oo uu ka dhici doono kulankii wacyi gelinta ee hawl-wadeenada imtixaanka.
Sidoo kale, kormeerayaasha ku qoran degmooyinka gobolka Mudug waxaa la farayaa in ay 17 bisha iska xaadiriyaan magaalada Galkacyo halkaas oo kuu ka dhici doono kulankii wacyi gelintu.
Dhammaan hawl-wadeenada ku qoran gobolka Karkaar waxaa iyagana la farayaa in toos u aadaan magaalada Qardho.
Kormeerayaasha, kalkaaliyayaasha iyo ilaaliyayaasha lagu qoray gobollada Sool, Cayn iyo Nugaal waxa ay igu toos u imaanayaan magaalada Garoowe.
Dhammaan magaalooyinkaas waxaa lagu diyaariyay imtixaankii, halkaas ayaana laga qaadanayaa marka meelayntu dhammaato.
Hawl-wadeenada imtixaanaadka ee sharafta mudan, waxaa lagu wargelinayaa inay muujiyaan xil kasnimo dheeraada ah ayna ku diyaar garoobaan guddoonada waxbarashada ee gobollada xilliga kor lagu soo sheegay.
Haddaba, waxaan ka codsanaynaa hay’adaha dawladda ee kala duwan iyo qaybaha bulshadaba in ay kaalin mug leh ka qaataan meel marinta hawlaha imtixaanka maadaama uu yahay hawl qaran oo aan qofna lagu hallayn.
Agaasimaha Waaxda imtixaanadka Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare Axmed Maxamuud Warsame (Axmed Saahid)
Guddigii loo xilsaaray xalinta khilaafka Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta aqalka sare hortagaya.
BREAKING NEWS:- Madaweyne Gaas Oo Shir isugu yeeray Golihiisa Wasiirada
(Dhagayso )Abaarta ka jirta Gobolka Sool Oo Sii kordhaysa iyo Qoysas Xoolo dhaqato ah Oo ku Soo Xarooday Magaalooyinka
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya Oo Micheal Keating ku eedeeyay in uu Faraha kula Jiro Siyaasada dalka
(Dhagayso) Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Bada Puntland ” Dekeda Bosaaso Waxaa la keeni doonaa dhawaan Qalab Casri ah Oo lagu bad baadiyo Doonyaha iyo Maraakiibta
Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya oo ka qeyb galay shirka Golaha Fulinta Ururka Midowga Afrika.
(VIDEO) Taliyaha ciidanka badda Puntland oo ka hadlay taageerada dowladda Imaaraatku siiso ciidanka bada Puntland iyo go’aankii barlamanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha barlamaanka Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo oo kusoo wajahan Garowe.
Madaxweyne Gaas oo Wasiirkiisa dekedaha u diray Dubai
Dalladaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya oo war murtiyeed kasoo saaray khilaafka barlamaanka Soomaaliya.